Ururka Warbaahinta Puntland ee Map oo Cambareyeey Xukunka lagu riday Wariye Kilwe Aadan – Radio Daljir
Ururka Warbaahinta Puntland ee Map oo Cambareyeey Xukunka lagu riday Wariye Kilwe Aadan
Maarso 3, 2021 1:32 g 1
Ururka Warbaahinta Puntland ee Map qoraal ay soo sareen Maanta waxay ku shegeen inay ku cambareynayaan talaabadii Maxkamadda Ciidamadda qalabka sida ee Puntland ku xukumeen 3 bilood oo xarig ah wariye Kilwe Aadan.
Hoos kaga bogo Qoraalka Map ka soo baxay.
Ururka Warbaahinta Puntland (MAP) waxa uu cambaareynayaa xukunka (Saddex bilood oo xarig ah) ay maxkamada Derajada 1aad ciidamada qalabka sida ee gobolada Nugaal, Sool karkaar iyo dembiyada culus ay ku ridey maanta 03 Maarso, 2021 Saxafi Kilwe Aden Farah.
Cadeymo la’aanta kiiska Kilwe iyo xukunka ku dhacay ayaa iska hor-imanaya (Contradiction), waxana gebi ahaanba meesha ka maqan Qodobka 87aad ee dastuurka Puntland oo ay shaqada maxkamadu ku egtahay.
MAP waxay ku tilmaameysaa xariga iyo xukunka Kilwe mid sharci darro ah oo ay riday maxkamad aan ikhtisaas u lahayn, waxaana marnaba aan la qaadan karin in saxafiga loo ekaysiiyo cid kale.
Dowladda Puntland waxaan ka sugeynaa inay jawaab waafi ah ka bixiso xukunka sharci darrada ah, sidoo kalena maxkamada ciidamada waxaan ku wargelineynaa inay iska ilaaliyaan dacwadaha ay galayaan iyo go’aanada ka dhalanaya.
MAP waxay ka digeysaa soo noqoshada arrimahan oo kale kuwaas oo dhibaato ku ah dimoqraadiyada la filayo inay ka hanaqaado Puntland, xorriyada hadalka iyo guud ahaan shaqada suxufinimo.
Qoraalka Ururka Map ayaa ku soo beegmaya xili Maanta maxkamadda Ciidamadda qalabka sida ee Puntland si sharci darro ah ay ku xukumeen wariye Kilwe Aadan oo si sharci darra ah 60 Cisho ugu xiran Xabsiga weyn ee Garoowe.
Madaxweyne Farmaajo oo shir deg deg ah la qaatay Guddiga xakemaynta COVID-19
DAD KU DHINTAY GOD DAHABKA LAGA QODO, DEEGAANKA MILXO EE GOBOLKA SANAAG (Waraysi)
Aswan 1 week ago
Waxan donaya tubabar warbahinta ah inan idinka heelo fadlan